Isu tiri izvo zvatiri kurarama uye isu tinorarama zvatiri. Hanukeii Izvo zvakati wandei kutsanangura asi zviri nyore kunzwisisa kana iwe uchizvinzwa. Iko kusanzwisisika kunzwa, uko kunoita kuti ucheme panguva iyoyo chaiyo, mauri pakupedzisira unoziva kuti kunetseka kwako kwakasiiwa kumashure uye unotanga kunzwa kufara uchifadzwa nenguva yakanaka.
Unoyeuka here iyo manzwiro aunayo nguva dzese paunosangana nechimwe chinhu kekutanga?
Kufanana neapo, mushure merwendo rurefu, iwe uchidzikisa pasi hwindo remota uye uchirega mweya upinde, unozendamira pamucheto wehwindo uye wotanga kunhuwidza kunhuwirira kwemunyu, iko kunhuhwirira kwegungwa kunotizadza nemufaro uye mufaro. . Iro gungwa rinokugamuchira iwe, uchizivisa kuti urikuswedera padyo kusvika pariri.
Kana iyo nguva yakasarudzika, iyo iwe yaunosvika kumahombekombe egungwa, unogara usina shangu uye unonzwa kuti jecha rakapfava, iro rinotanga kuvhara tsoka dzako, rinotsvedza pakati pezvigunwe zvako nguva dzese apo gungwa rinouya, rinoenda kwariri, kuchenesa tsoka dzako kasingaperi, kuti uve wakareruka, uye unoona kuti hupenyu hwako hwezuva nezuva huchave, parizvino, kumbomira.
Iko iko kunzwa kwekuti mhepo yegungwa inokupa iwe, iyo inofamba pakati pemashizha emichindwe, inokama vhudzi rako, ichigadzira kurohwa kutsva mairi painopfuura, uyezve iyo inonanzva kumeso kwako, ichikurudzira kuti unyure mumvura. uye hupenyu hupenyu, inova nguva chaiyo, ndiko kuti Hanukeii.
Hupenyu husina shangu
Hanukeii iwo ruvara rweorenji rwekuvira kwezuva kunoratidzirwa pagungwa rakadzikama. Irowo rugare rwunonzwa kana uchitarisa kubva kumahombekombe.
Hanukeii Ndiyo runyararo rwakachinjwa nemafungu achipwanya parutivi rwako.
Hanukeii ndiwo musimboti we "dolce far niente", ndiwo mufaro wekusaita chinhu. Iri kucherechedza kuti zuva, richifamba zvishoma nezvishoma, rinosvika pakakwirira kwazvo mudenga, uye kuti gare gare, nenzira imwechete iyo iro rabuda, rinodzika zvakare.
Kana kupfava kukava kwakakwana, kana kuchimbidza, kuwandisa uye kusagadzikana zvinoita kunge kuri kwechinhu chakafanana. Ndizvozvo Hanukeii.
Kufamba kunodzokera kumba husiku, uchinzwa gungwa nechekumashure rakavhenekerwa nemwedzi. Hanukeii Iko kunzwa kwekumuka uchiziva kuti kune nguva. Kwekudya chamangwanani, kumhanya nemumahombekombe, kurara zvishoma.
Ndiyo nguva yekurara pamahombekombe pasi pemuraira mushure mekubuda mumvura, ndiyo chena bhaini mutsara padyo netani paganda; Hanukeii ndidzo hurukuro dzechokwadi, dzinonakidza uye dzakadzikama masikati.
Hanukeii shure kwezvose, chii chinonyanya kutsvakwa. Hanukeii inguva yekudzikama.
Hanukeii Iko kuzorora neyakajairika.
Inguva iyo iyo asphalt inoshanduka kuita jecha, mota dzinoshanduka kuita zvikepe, bhegi rinoshanduka rikaita bhodhi rekufambisa, uye zvitsitsinho zvichichinja kuita shangu.
Ndiyo nguva usati wakwira mundege, ndirwo rwendo muchitima, irikutarisa mumugwagwa nepahwindo remota iwe uchifungidzira nguva yekuona gungwa, rakasviba kure kure, kumusoro. Iko kunzwa kwekunakidzwa kana iwe uchiziva kuti pane zvishoma zvekuenda. Iro bvudzi rakamira kumucheto kubva pakunyorova. Ichokwadi kana ichidarika zvinotarisirwa.
Hanukeii Inguva iyo inonyangarika. Ndiwo maawa ari kubuda uye wachi yakakanganikwa mudhirowa. Hanukeii iri kuva neyese nguva mupasi, iri kuve neminiti yega, nguva yega yega uye kuitisa mukana nayo munzvimbo yakadzikama.
Hakusi kuda kuti zuva ripere, kugadzira chiuru zvirongwa, hazvina basa kuti unoenda kunorara nguvai. Hanukeii kugona kutadza kurara kuti uone kubuda kwezuva.
Hanukeii Ichowo chiyeuchidzo chinotapira chepamhenderekedzo yegungwa, zuva uye jecha zvinoramba zvichioneka nguva nenguva pakati peshangu, kunyangwe mavhiki mashoma mushure mekudzoka kumba.
URI UNODA KUTI USVIRE KUTI?
Kunyangwe tichida kukosha uye iko kwechokwadi, isu tichiri muzera redhijitari saka kana iwe uchida kutitsvaga, unogona kutitumira meseji mune ino fomu uye tinokupindura nekukurumidza sezvazvinogona.